Barkhad Jaamac oo Noqday Mucaaradka Ugu Weyn ee Xukuumadda Siilaanyo, Khasaare iyo Faa’iido | Shabakada Gabooyaha
Barkhad Jaamac oo Noqday Mucaaradka Ugu Weyn ee Xukuumadda Siilaanyo, Khasaare iyo Faa’iido
Barkhad Jaamac Xirsi oo ah xoghayaha cadaaladda xisbiga Waddani ayaa noqday mucaaradka ugu weyn ee madaxweyne Siilaanyo kadib markii uu horey u ahaa Lataliyaha madaxweynaha ee arriamaha dadka la haybsooco ama beelaha Gabooye.
Barkhad Jaamac ayaa bartiisa bulshada iyo warbaahinta si joogta ah uga dhaliila xukuumadda Siilaanyo maadama uu ka tirsan yahay xisbiga Waddani ee xisbiyada mucaaradka Somaliland ugu ballaaran.
Barkhad ayaa bartiisa Facebook kusoo daabacay 1, May, 2017, qoraal uu isbarbar dhig ku sameynayo dowladdii Siyaad Barre iyo tan hadda Madaxweyne Siilaanyo, waxaanuu isku barbardhiggay illaa 6 qodob oo uu ku sheegay iney yihiin kuwo ay ka siman yihiin labadaasi xukuumadood.
Xukumaddeenna hadda talada dalka haysa ee Madaxweyne Siilanyo iyo tii Siyaad Barre dhuf-sane yaraha ay waddaagan waxaa kamid ah:
-Xadhigga iyo cabudhinta xoriyadda hadalka, eexda iyo qaraabakiilnimada.
-Maamul xumadda iyo ku kala awood badnaanshiyaha xilalka qaranka.
-Dulmiga iyo cadaalad darada muwaadiniinta lagula kaco.
-Musuqa iyo maareyn la’aantiisa.
-Abaarta iyo arin xumada jirta tii la odhan jiray daba dheer iyo tan maanta dad iyo duunyo idleysay
ku sii dar bal inta kale adigu?
Hadaba waxaa is weydiin leh, haddii xukuumadda Siilaanyo ay habkaa ku dhaqantay, Somaliland ay doonayso cadaalad, tii horey wixii loogu mucaaradayna ay ahayd cadaalad darro, dagaalkii sokeeye maxaa ka dhaxlay oo aan burbur iyo baaba’ ahayn.
Dadka siyaasadda falanqeeya ee beesha Gabooye ayaa Barkhad kula talinaya in haddii uu qof jeclaanayo aanuu isku wada dhiibin, haddii uu cid nacayana aanuu is wadanacsiin, maadaama ay siyaasaddu isbedbdel badan tahay meel qurana aaney taagneyn, teeda kalena imaqlaay ay ka dambeyso iqariyaay, maadaama aanuu haysan cid is garab taagta dhibaatada soo gaartaana inteeda badan ay taabaneyso dadka uu ka soo jeedo. in kastoo geesinimadu ay wanaagsan tahay ayaa hadana waxaa fiican in caqligaagu shaqeeyo, maadaama ay dhici karto in si gaadma ah oo aanuu iska fileyn loo dhibaateeyo.
Si kastaba, waxaa muhiim ah in Siyaasiga Gabooye uu noqdo mid dhaliishiisa qaata oo haddii wax laga sheego aanuu u arkin in cadaw lagu yahay, laakiin uu fahmo ulajeedada loo toosinayo.